Ikhebula Tray Esemthethweni Izitifiketi Emhlabeni wonke
Besca iye eqinisekisiwe by ISO9001 eChina, UL e-USA kanye CE EU ne design professional kanye namasu kakhulu kahle ukukhiqiza. Lezi izitifiketi kukhona isinyathelo sokuqala Besca sika ku-International emakethe. Besca ekhetha abahlinzeki impahla eluhlaza kazwelonke nge high quality lezinsimbi: Wuhan Iron & Steel Company Limited, Bao Steel Company Limited, futhi Angang Steel Company Limited. umklamo womkhiqizo Besca sika of span esikhulu, ophezulu ukubekezelelana, isisindo ekukhanyeni, futhi isikhala ekulondolozeni. Yini okubaluleke nakakhulu, imikhiqizo 'super amandla nokusebenza mechanical kusenza sizinze yokubukeka, futhi ayakwazi ukuhlangana zonke ejwayelekile kwemvelo.
Ikhebula Tray Production Flow Strictly Kuphethwe
Besca Factory has izinhlobo ezahlukene imishini CNC, izinga okusezingeni ukumodeliswa imishini, processing imishini, elinikeza isiqinisekiso esinamandla kakhulu imikhiqizo high. Ekwakheni, ukushisa ekwelapheni, ukugaya, Welding, inhlangano emabhokisini zonke imisebenzi kuyaqedwa ngokuzimela e Besca endaweni yokukhanda. Thina ngempumelelo kwehlisa intengo umkhiqizo ususe labo ushintsho. Inani elikhulu lezinqola onjiniyela abangongoti anganikeza amakhasimende elilungile ukwakhiwa izixazululo, futhi kungaba ukuxazulula izinkinga ukuklanywa nokwakhiwa ukuqinisekisa intuthuko.
Ikhebula Tray Quality traceability System Ligcinwe
Ukuze ikhonze imikhiqizo high, kubalulekile ukuhlola imikhiqizo ekhiqizwa ngaphambi kokubeletha. Kulesi sikhathi, Besca Kutfutfukisa izinqubo nokuhlolwa elawula kunazo, nezitimela ifektri abahloli ngaphandle okusezingeni eliphezulu kakade ezingeni imishini yayo wokuhlola umkhiqizo. Besca inikeza emva inkonzo ukudayiswa kanye esizeni unjiniyela amasu usekelo feedbacks enemininingwane kanye nezixazululo. Besca njalo ephikelela imiqondo ikhwalithi yesevisi ingena okokuqala.
New Ikhebula Tray Design Sikhanyisiwe
Besca namanje unganelisekile ngokugcwele ukusebenza zamanje neqiniso ukuthi seluvele esiqinile ukukhiqizwa inqubo ephelele ukuhlolwa nokuhlolwa nezinqubo. Kunalokho iqhubeka ukuqhuba abacwaningi emakethe futhi ithuthukisa imiklamo emisha ukuhlangabezana ekuthuthukiseni izimfuno ukwakhiwa emakethe. Besca ukholelwa ngokuqinile ukuthi yilabo kuphela kungaholela emakethe owamukelwa unaphakade.